Qaanuunka LSS – Personlig Assistans Malmö
Dib u habayn­ta kal­kaalin­ta
Kal­kaalin­ta gaar­ka ahi wax­ay ku salay­san­ta­hay dib u habayn lagu same­ey­ey Sve­ri­ge 1994. Kal­kaalin­ta gaar­ka ahi waa arrin qaayo badan iyo arag­ti cusub oo ka tur­ju­may­sa in la oqoon­sa­day door­ka qof­ka lax­aad­ki­i­su aanu buux­in iyo xuqu­uq­di­i­sa. Taas waxa dhe­er in kal­kaalin­ta loo arkay xaq uu leey­a­hay loo-ade­e­gu­hu iyo inay tahay kaal­mo ku waja­han isla mar­kaas­na uu ku tasar­ru­fayo loo-ade­e­ga­ha laf­ti­i­su. Taas oo loo­ga jee­do in si dham­mays­ti­ran loo-ade­e­gu­hu u leey­a­hay doo­ras­ho buux­da oo aaney kaal­ma­du gacan­ta ugu jirin goob shaqo ama hey’ad buls­ho bal­se uu guud ahaan tasar­ruf­kee­da leey­a­hay qof­ka ay qusaysaa.
Mudasha­da kal­kaa­lin gaar ah
Cid­da mudan kal­kaa­lin gaar ah waxa habay­naya qaa­nu­un­ka ku saab­san kaal­ma­da iyo ade­e­ga ku waja­han dad­ka lax­aad­koodu kala dhi­ma­ny­a­hay qaar­kood ee LSS. Kal­kaa­lin gaar ah waxa aad mudan­ta­hay (xaq u lee­da­hay) haddii:
Kori­taan­kaa­ga garaad-aah­need haka­day oo aanu dham­mays­tir­min, had­dii aad qab­tid autism, ama aad ku jir­tid xaa­lad u dhi­gan­ta autism ama;
Hiba­daa­da mas­kax­eed hoo­say­so taas oo sabab­tee­du tahay dhaa­wac mas­kax­da gaad­hey qaang­aad­h­ka ka dib, dhaa­wacaas oo ku yimi dagaal, hagar­daa­mo iwm cid kale gey­sa­tey ama cudur kee­nay, ama;
Ay jiraan waxy­aa­bo kale oo si joog­to ah u kala dhi­may lax­aad­kaa­ga mas­kax­da ama jid­h­ka oo aanu kee­nin gabow caa­di ah, waxy­aa­ba­haas oo si wayn u adkay­naya nolol­maa­leed­kaa­ga sidaas dar­teed­na si wayn kuu­gu baa­hi­ge­li­naya in aad heshid kaal­mo ama adeeg.
Qof­kii buux­iya shuru­u­da kor ku qora­ni wuxu cods­an karaa kal­kaa­lin gaar.